Igumbi lokurhweba likaRobitel 'Igumbi lokubaleka' lonyango olukhohlisayo- iHorror
Ikhaya	Iindaba ezothusayo zoLonwabo	Inqwelo erhuqwayo kaRobitel 'Igumbi lokubaleka' lunyango olukhohlisayo
Inqwelo erhuqwayo kaRobitel 'Igumbi lokubaleka' lunyango olukhohlisayo
by UTimothy Rawles Oktobha 19, 2018
by UTimothy Rawles Oktobha 19, 2018 1,113 imbono
Kukuchukumisa okuqhelekileyo kwetreyila ukuvula ngeMalvina Reynolds 'kwiibhokisi ezincinci,' kumdlalo bhanyabhanya malunga nabantu abazama ukubaleka besebenzisa ubulumko babo kuphela.
Oku kusetelwe ngokufanelekileyo uAdam Robitel Igumbi lokuPhupha iintloko ezingena kwimidlalo yeqonga ngoJanuwari 2019. URobitel ibinguye obukeleyo ukususela kwakhe Ukuthatha kukaDeborah Logan waba lihlelo. Ulandele loo nto kunye nempumelelo enkulu Inobuqhophololo: Isitshixo sokugqibela.
Ukusuka kwinkangeleko yefilimu yakhe yamva nje, ugcina umxholo ongaphaya kwendalo kodwa edibanisa amacebo okujija nokujika ngendlela yeepuzzle zomzimba. Kwimeko apho uzalwe izolo isihloko sibhekisa kwezona zinto zinkulu zokuqokelelana kwezentlalo ukusukela kwikaraoke.
Umdlalo wokwenyani uqala ngokubeka iqela labantu kwigumbi elinomxholo kunye nexesha elinikezelweyo lokufumana indlela yokuphuma ngaphambi kokuba ialam ikhale. URobitel uthathe loo mbono wayenza yathandabuza kwaye yoyikisa.
Nantsi ingqungquthela esemthethweni:
“Igumbi lokubaleka konwabisa abantu abangaziwayo abathandathu abazifumana bekwimeko engaphaya kwamandla abo kwaye kufuneka basebenzise ubulumko babo ukuze bafumane umkhondo okanye bafe. ”
Igumbi lokuPhupha iya kuvula kwiithiyetha ngoJanuwari 2019.